पीएसजीको जित तर मेस्सी असन्तुष्ट किन ? – ramechhapkhabar.com
पीएसजीको जित तर मेस्सी असन्तुष्ट किन ?
काठमाडौं। फ्रेन्च लिग-१ अन्तर्गत आईतवार राति भएको खेलमा बलियो टोली पीएसजीले लियोनलाई २-१ गोलले पराजित गरेको छ।
पीएसजीको घरेलु मैदान पार्क डे प्रिन्सेसमा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरीको पहिलो हाफ खेलेका थिए। दोस्रो हाफको ५४औं मिनेटमा लियोनका मिडफिल्डर लुकास पाक्वेटाले गोल गर्दै पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए।
तर खेलको ६६औं मिनेटमा पीएसजी खेलमा फर्कियो। पीएसजीका लागि नेयमारले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई बराबरीको अवस्थामा पुर्याएका थिए।
खेलको ७६औं मिनेटमा पीएसजीका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले लियोनल मेस्सीलाई मैदानबाट प्रतिस्थापन गरे। जसको कारण मेस्सी केही रुष्ट देखिएका थिए। उनले पोचेटिनोसँग हात मिलाउन पनि मानेनन्।
यद्यपि पीएसजीले खेलको इन्जुरी समयमा विजयी गोल गर्न सफल भयो। पीएसजीका स्टार खेलाडी एमबाप्पेको पासमा स्ट्राइकर माउरो इकार्डीले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई जित दिलाउन सफल भएका थिए।
आईपीएलमा बैंग्लोर र कोलकता भिड्दै, कोहली रेकर्ड नजिक
इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर र कोलकता नाइट राईडर्स आमाने सामने हुने छन् । यो खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने ८ बजेदेखि शुरुहुने छ । कोरोना महामारीका कारण भारतमा आईपीएल स्थगित हुँदा बैंग्लोरले ७ खेलबाट १० अंक जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा राखेको थियो ।
कोलकता भने ७ खेलबाट ४ अंक जोड्दै सातौं स्थानमा रहेको थियो । आजको खेलमा बैंग्लोरका कप्तान विराट कोहलीलाई २ वटा रेकर्ड बनाउने अवसर रहेको छ । आईपीएलमा कोहलीको २०० औं म्याच हुने छ । विराट एउटै टिमबाट २०० म्याच खेल्ने पहिलो खेलाडी बन्ने छन् ।
आईपीएलमा यसअघि २०० म्याच खेल्ने अरु चार जना खेलाडीहरु पनि छन् । त्यसमा महेन्द्रसिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा र सुरेश रैनाले यो रेकर्ड बनाइसकेका छन् । टी २० मा १० हजार रन बनाउने अबसर पनि विराटलाई रहेको छ । यदि आज उनले ७१ रन बनाएमा यो रेकर्ड उनले बनाउने छन् ।
अहिलेसम्म टी २० मा क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड र शोएब मलिकले १० हजार रन पुरा गरिसकेका छन् । आजको खेलमा कोलकताको टिममा लकि फर्गुसनले स्थान बनाउने पक्का जस्तै छ । अस्ट्रेलियाका पेट कमिन्सले आईपीएल नखेल्ने बताए पछि फर्गुसनले स्थान बनाउने सम्भावना रहेको हो ।
यसका साथै ओएन मोर्गन, आन्द्रे रसेल र सुनिल नरेन पनि विदेशी खेलाडीको रुपमा टिममा रहने छन् । नरेनले सीपीएलमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा अर्का खेलाडी शाकिब अल हसनले टिममा स्थान बनाउन भने केही कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
यस्तै बैंग्लोरका अलराउण्डर वाशिंगटन सुन्दर घाइते भएपछि उनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । उनको स्थानमा श्रीलंकन खेलाडी वानिन्दू हसरंगाले टिममा स्थान बनाउने पक्का जस्तै छ । यसका साथै एबी डिभिलियर्स, ग्लेन म्याक्सवेल र काइल जेमिन पनि विदेशी खेलाडीको रुपमा टिममा हुन सक्छन् ।